The Ab Presents Nepal » आज मिति २०७६ साल साउन ५ गते आइतबार, आजको राशीफल सागै लक्ष्मी भगवानको दर्सन गरौ !
आज मिति २०७६ साल साउन ५ गते आइतबार, आजको राशीफल सागै लक्ष्मी भगवानको दर्सन गरौ !
आज मिति २०७६ साल साउन ५ गते आइतबार । आजको राशीफल यस प्रकार रहेको छ। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।
मेष राशी – ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) उपलब्धिका लागि निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ । बन्ने निश्चय भएको काम अचानक बिग्रन सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर रहनाले जोसजाँगरमा कमी आउनेछ । नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खनुहोला। अरूको भर पर्दा उपलब्धि गुम्न सक्छ, सजग रहनुहोला।पठनपाठनमा समय दिन नसकिएला।आश्वासन दिएर झुक्याउनेहरूले सताउन सक्छन् ।
बृष राशी –( इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो ) सन्तानले प्रसन्नता दिलाउनेछन्। लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ । पढाइलेखाइमा सामान्य प्रगति हुनेछ। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ । सन्तान वा सहयोगीका माध्यमबाट काम बन्ने देखिन्छ । आफ्नो प्रतिभाको कदर हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा पनि अरूलाई उछिन्न सकिनेछ। चिताएका काम बिस्तारै भए पनि सम्पादन हुनेछन्।प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ ।
मिथुन राशी- ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह ) मेहनतले सम्मानित स्थान समेत दिलाउनेछ । बौद्धिक अभिव्यक्तिले ठूलो अवसर दिलाउन सक्छ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने चिताएको काम समेत सम्पादन हुनेछपहिलेका कमजोरीलाई सुधार्ने मौका पाइनेछ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
कर्कट राशी – ( हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो ) महत्वाकांक्षी योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नु नै बेस होला। हठ गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दुःख पाइनेछ। परिवारजनको सहयोग लिँदा राम्रो हुनेछ।मातृधन, पशुधन र जमिनबाट लाभ हुन सक्छ । मान्यजनसँग असमझदारी बढ्न सक्छ। अरूको भर पर्दा धोका हुन सक्छ।अरूको सुझावमा भर नपर्नुहोला ।
सिंह राशी –( मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे ) व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ। कामले अरूलाई प्रभावित पारेर फाइदा लिन सकिनेछ। कीर्तिमानी काम सम्पादन होला ।सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व हातलागी हुनेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर फाइदा उठाउने समय छ। भूमि र पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ । कामले धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ ।
कन्या राशि –( टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो ) प्रतिस्पर्धामा पनि केही कमजोर सावित भइएला।आफन्तबाट समेत टाढिनुपर्ने समय छ । व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने समय छ। आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिने योग छ, सचेत रहनुहोला। वैदेशिक क्षेत्रबाट भने सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ।काममा स्थानान्तरण अथवा टाढाको यात्रा हुने सम्भावना छ। काममा आलस्य जाग्ने र खर्चको मात्रा बढ्ने देखिन्छ।
तुला राशि – ( र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते ) पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । पहिलेका कमीकमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने मौका छ। मनग्य धन आर्जन हुनेछ। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द पाइएला। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्व निखार्दै नयाँ काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ‘।
बृश्चिक राशी- ( तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु ) प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै आम्दानी बढाउन सकिनेछ ।व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ।कृषिकर्म र व्यावसायिक काममा भने केही चुनौती आइलाग्न सक्छन्। सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। जटिल काम सम्पादन हुनाले पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ । तापनि मनग्य धन आर्जन गर्ने अवसर जुट्नेछ। विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ ‘।
धनु राशी –( ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे ) परिवारजनको साथले उत्साहित भइनेछ। व्यापार–व्यवसायमा लाभ हुनेछ । व्यावसाय विस्तारका लागि यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ। प्रेम वा मित्रताको बन्धन कसिने समय छ। भौतिक साधन जुट्नेछ भने आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ।आयआर्जन राम्रै हुनेछ। कामबाट फुर्सदिलो भइनेछ भने अतिथिका रूपमा सत्कार समेत पाइने सम्भावना छ।
मकर राशी – ( भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि ) शत्रुहरूको चलखेल बढ्नाले चुनौती समेत सामना गर्नपर्ला।काममा सफलता पाउन केही प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय छ। तापनि मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ । भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ।व्यवसायमा आम्दानी बढ्ने र फाइदा उठाउने समय छ। सम्झौता गर्नुपरे पनि अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ’ ।
कुम्भ राशी – ( गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द ) कृषि तथा पशुपालनमा त्यति लाभ नभए पनि व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ। पितृधनको उपयोगबाट विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। श्रमको उचित मूल्यांकन होला। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। ज्ञान प्राप्त हुने योग छ। पढाइमा प्रगति हुनेछ। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ’ ।
मीन राशी – ( दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि ) रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन्।सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ। धेरैले तारिफ गर्नेछन् ।कीर्तिमानी काम सम्पादन हुन सक्छ ।प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ।नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय बित्नेछ।मंगलमय कृत्य सम्पादन गर्ने समय छ ‘।
माडीमा अयोध्याधामको ‘डीपीआर’ निर्माण सुरु भारतमा खैला बैला
अब‘ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउछौ – माधवकुमार नेपाल
मनकामना माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, मंसिर १९ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
माधव नेपाललाई अध्यक्ष छाडेर सत्ता संकट टार्ने ओलीको रणनीति
रमेश प्रसाईले आँटे बिहे कल्पना दाहाल भन्छिन लेखेको पाईन्छ देखेको पाईदैन, बिगत सम्झेर बनिन भाबुक (भिडियो)
हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा आगलागी भयो
भगवानले सबैको कल्याण गरुँन ! हेर्नुहोस् मंसिर १८ गते बिहिबारको राशिफल
बुढानिलकण्ठको दर्शन गर्दै आज मंसिर १७ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस
आज २०७७ साल मंसिर १५ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस र ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस
मनकामनामाता को दर्शन गर्दै आज २०७७ मंसिर १४ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस